असारको ७ गते अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो सूर्य ग्रहण, यी ८ राशिलाई उच्च प्रभाव, कस्ले हेर्ने, कस्ले नहेर्ने? जान्नुहाेस्! – PathivaraOnline
Home > प्रविधि > असारको ७ गते अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो सूर्य ग्रहण, यी ८ राशिलाई उच्च प्रभाव, कस्ले हेर्ने, कस्ले नहेर्ने? जान्नुहाेस्!
असारको ७ गते अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो सूर्य ग्रहण, यी ८ राशिलाई उच्च प्रभाव, कस्ले हेर्ने, कस्ले नहेर्ने? जान्नुहाेस्!
admin June 20, 2020 प्रविधि, समाचार 0
आउन लागेको असार ७ गते अहिलेसम्मकै दुर्लभ दिन हुँदैछ । उक्त दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो सूर्य ग्रहण लाग्दैछ । २०७७ साल असार ७ गते आइतबारको सुर्य ग्रहण नै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो हुनेछ ।
खण्डग्रास सुर्यग्रहण भनेर यस्को नामाकरण गरेको छ । बिहान १० बजेर ५३ मिनेटमा प्रारम्भ हुने यो ग्रहण १२ बजेर ४० मिनेट मध्य अवस्थामा आउँछ र २ बजेर २४ भन्दा पछाडीको समयमा यो सकिने छ । यो ग्रहणको अवधि ३ घण्टा ३१ मिनेटको हुनेछ ।
खण्डग्रास सुर्यग्रहण २ नक्षत्रलाई समेटेर लाग्दैछ । मिथुन राशिमा लाग्ने कारणले यस्लाई विशेष रुपमा हेरिएको छ । बीचको ३ घण्टा ३१ मिनेटमा हामीले बिशेष सावधानी पुर्याउनु पर्दछ । मृगशिरा र आरार्ध्या नक्षत्रमा हुने र मिथुन राशीमा हुने हुनाले यस्ले १२ राशिमा फरक फरक असर पार्नेछ ।
वृष, मिथुन, कर्कट, तुला, वृश्चिक, धनु ,कुम्भ र मीन राशीमा नकरात्मक प्रभाव पर्दै हेर्न मिल्दैन । मेष, सिंह, कन्या र मकर राशिले ग्रहण हेर्दा विशेष फाईदा हुनेछ । मेष राशिले ग्रहण हेर्दा लक्ष्मी प्राप्त हुनेछ भने सिंह राशिलाई लाभ मिल्ने छ ।
त्यस्तै कन्या तथा मकर राशिहरुको लागि सुख प्राप्त हुनेछ ।नोट : यो ज्योतिष विज्ञानमा आधारित सामाग्री हो । अन्तिमसम्म पढिदिनुभएकोमा धन्यवाद । आफुले पढिसक्नुभएकाले अरुका लागि सेयर गरिदिन सक्नुहुनेछ ।
यस्तो छ आजकाे दुर्लभ साैर्य ग्रहण! यी ४ राशिहरूमा उच्च प्रभाव, के गर्न हुन्छ या हुदैन, जान्नुहाेस्
राजनीतिमा नयाँ ट्वीस्ट, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना बढ्यो!